बच्चाको मुख भित्र आमाले देखिन् अर्को प्वाल, आमा-बाबु दुवैको उड्यो होस् ! – नेपाली संगसार
बच्चाको मुख भित्र आमाले देखिन् अर्को प्वाल, आमा-बाबु दुवैको उड्यो होस् !
नेपाली संगसार calendar_today २ जेष्ठ २०७८, 4:54 am
काठमाडौं । बेलायतमा एक बच्चाको मुखभित्र अर्को प्वाल देखेपछि आमाको होस् उडेको छ । २४ वर्षीया महिललाले आफ्नो बच्चालाई खेलाउदै थिइन् । उनले १० महिनाको छोराको डाइपर फेर्दै थिइन् । त्यै बेला उनले बच्चाको मुखमा अर्को प्वाल परेको देखिन् ।
हतार हतार उनले आफूले देखेको जानकारी आफ्नो श्रीमानलाई सुनाईन् । श्रीमान पनि आत्तीए । उनले मुख भित्र हात हाल्न खोज्दा श्रीमानले अस्पताल लैजाने बताए । त्यसपछि उनीहरु अस्पताल पुगे ।
‘म धेरै नै आत्तीएकी थिए । मुखमा अर्को प्वाल परेको देख्दा मृेरो सात्तो उडेको थियो ।’ महिलाले हाक्टरलाई भनिन् ।
तर जब उनीहरु अस्पताल पुगे र हक्टरले जे भने अनीहरु अचम्मीत भए ।
मुखमा देखिएको प्वाल एक स्टीकर भएको डाक्टरले जानकारी दिए । डाक्टरले फ्ल्यासको साहयताले हेरे र स्टीकर भन्ने थाँहा भएपछि औलाले सजिलै झिके ।